REDE MISSIONÁRIA: Yohane I: Akuapem Twi
Yohane I 1Nkwa Asem (NA-TWI)
1 Yɛrekyerɛw mo afa nea ɛwɔ hɔ fi mfitiase, nea yɛate, nea yɛde yɛn ani ahu, nea yɛhwɛe na yɛde yɛn nsa kae wɔ nkwa asɛm no ho no ho. 2 Nkwa no daa ne ho adi no, yehui. Ɛno nti, yɛka ho asɛm kyerɛ mo ka nkwa a enni awiei a na ɛwɔ Agya no nkyɛn a wɔdaa no adi kyerɛɛ yɛn no. 3 Yɛkaa nea yehui na yɛtee no kyerɛɛ mo nso, sɛnea ɛbɛyɛ a mode mo ho bɛbata yɛn ho wɔ ɔdɔ a yɛne Agya no ne Ɔba Yesu Kristo wɔ no mu. 4 Yɛrekyerɛw eyi sɛnea ɛbɛyɛ a yɛn anigye bewie pɛyɛ.
Yohane I 2Nkwa Asem (NA-TWI)
Yohane I 3Nkwa Asem (NA-TWI)
Yohane I 4Nkwa Asem (NA-TWI)
4 Me nuanom adɔfo, munnnye wɔn a wɔka se wɔwɔ Honhom no nyinaa nni. Mmom monsɔ nhwɛ nhu sɛ honhom a wɔwɔ no fi Onyankopɔn anaa. Efisɛ, atoro adiyifo bebree ahwete. 2 Ɔkwan a wubetumi afa so ahu sɛ obi wɔ Onyankopɔn Honhom no ne sɛ, ɔbɛpae mu aka se, Yesu Kristo, a ɔbae sɛ onipa no, wɔ Honhom a efi Onyankopɔn. 3 Na nea ɔnka saa mfa Yesu ho no nni Honhom a efi Onyankopɔn. Saa Honhom no yɛ Kristo tamfo. Motee sɛ saa na ɛbɛba nanso ɛwɔ wiase ha dedaw.
Yohane I 5Nkwa Asem (NA-TWI)